စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်း တစ်လုံး ဖြစ်တဲ့ HUAWEI Nova 2i Aurora Blue | Mizzima Myanmar News and Insight
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်း တစ်လုံး ဖြစ်တဲ့ HUAWEI Nova 2i Aurora Blue
နေရာအနှံ့သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေထဲမှာ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်မယ့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးကတော့ သင့်ရဲ့တနေ့တာမှာ လိုအပ်မှာ အသေအချာပါပဲ။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စမတ်ဖုန်းဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုလဲ ? ကလေးတစ်ယောက်တောင် အလွယ်ဆုံးဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းဆိုတာဖုန်းခေါ်ဆိုမှု တွေပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ စာတိုလေးတွေ ပေးပို့နိုင်တဲ့အပြင် အခြေခံဂိမ်းလေးတွေသာ သွင်းထားပေးတဲ့ အခြေခံဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ မတူတဲ့ စမတ်ဖုန်းဟာ အဲဒီ့သာမန်အရာလေးတွေအပြင် အများကြီး ပိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းဟာ အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပြီး ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်သလို ခရီးလမ်းညွှန်မှုတွေပါ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်၊ ဗီဒီယိုရိုက်မယ်၊ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ ဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်မယ်။ အီးမေးလ်တွေပို့မယ် အစရှိတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နဂိုမူလစွမ်းဆောင်နိုင်တာထက်ကျော်လွန်ပြီး တစ်ခုခုလုပ်ချင်နေတယ်ဆိုရင်လည်း စမတ်ဖုန်းတွေအတွက် အခမဲ့ Download ရယူနိုင်ပြီး လိုအပ်ချက်အများကြီးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ Application တွေ ထောင်ချီပြီး ရှိနေပါတယ်။ ကား၊ ရထား၊ လေယာဉ်စောင့်နေရင်း ပျင်းလာတယ်ဆိုရင် အခမဲ့ဂိမ်းတစ်ခုကို Download ဆွဲဒါမှမဟုတ် Youtube , Netflix အစရှိတဲ့ ကနေ ကိုယ်နှစ်သက်ရာရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ် ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုခုကို ကြည့်နေလိုက်ရုံပါပဲ။
အခုရောက်ရှိနေတဲ့ ခေတ်ဟာမိုဘိုင်းကမ္ဘာဖြစ်ပြီး လူတိုင်းဟာကွန်ပြူတာတစ်လုံးနီးပါး အသုံးဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို အိတ်ကပ်ထဲထည့်ထားပြီး ၂၄ နာရီ ရ ရက်ပတ်လုံးတစ်နှစ်ကို ၃၆၅ ရက်နဲ့ အင်တာနက်ကနေတဆင့် တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူတိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားနေကြတာပါ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ လူတွေရဲ့ အာရုံခံစားမှု ပုံစံတွေဟာ လည်းတနေ့ထက်တနေ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့အခါမှာ ပိုမိုသစ်လွင်ပြီး innovatic ဖြစ်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဟာ သူတို့လက်ထဲမှာရှိနေဖို့ လိုအပ်နေတာအမှန်ပါ။ ပြည်တွင်းစျေးကွက်ထဲမှာ စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်တွေ အများအပြားရှိနေတဲ့ အခါ ဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာတော့ အရေးကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍပါပဲ။
သင့်အနေနဲ့ သင်အသုံးပြုမယ့် ငွေကြေးပမာဏ ၊သင်လိုချင်တဲ့ Flash Ship ဖုန်းတွေ မှာပါတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ၊ ယနေ့ခေတ်မပါမဖြစ် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ဝေမျှဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ အလန်းစားဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ကင်မရာအရည်အသွေး ၊စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွင်းက မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှု ၊ lastet Game တွေ ၊App တွေကို ၊ Video တွေကို မျက်နှာပြင်အပြည့်အဝခံစားနိုင်ဖို့ စကရင်အရွယ်အစားတွေကတော့ အရေးပါတဲ့အချက်တွေပါပဲ ။
သင်အသုံးပြုလိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုညွှန်ပြပါဆိုရင် HUAWEI Nova 2i Aurora Blue ကိုညွှန်ပြပါရစေ။ HUAWEI ရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေအပြင် ဓာတ်ပုံသမားတွေကိုပါ မဟာဗျူဟာကျကျ ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ Leica တပ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းတော်တော်များများဟာ ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုတွေ boom ဖြစ်လာတဲ့ နည်းတူ ကင်မရာပိုင်း ၊ စကရင်အရွယ်အစားတွေ ၊finger Print နည်းပညာတွေနဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို စွဲဆောင်လာကြတာ အားလုံးအသိပါ။ HUAWEI ဟာ nova 2i ကို ပြည်တွင်းမှာ စတင်ကြေညာခဲ့ပြီး Aurora Blue ကိုစျေးကွက်ထဲကို 2017 ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်ဝန်းကျင်မှာ ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ မြန်မာကျပ်ငွေ ၃၃၉,၀၀၀ နဲ့ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ်၊ HUAWEI nova 2i ဝယ်တဲ့သူတိုင်းအတွက် ဒီခရစ်စမတ်ကာလမှာ 5000 mAh Power Bank နဲ့ MPT Data Bonus တွေပါ ရရှိနိုင်မယ်ဆိုပါတယ်။ ၅၀၀၀ ကျပ်ထည့် အပိုငွေ ၃၀၀၀ ကို ၁၂ လတိတိရယူနိုင်မယ်ဆိုတော့ ဒီဖုန်းကိုဝယ်တာနဲ့တင် ဖုန်းငွေဖြည့် သုံးစွဲမှုအတွက် ကိုယ့်ဘက်ကရမယ့် အခွင့်အရေးပါပဲ။ အားသွင်းကြိုးတွေ အားသွင်းတဲ့ခေါင်းတွေ နားကြပ်တွေကိုတောင် ၃ လ warranty ပေးထားသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်လိုလက်ဆောင်တွေ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးမလဲတော့ မသိနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီဖုန်းဟာ ထိပ်တန်းအဆင့် စွမ်းဆောင်ရည်တွေပါဝင်တဲ့ ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့ဘက်မှာ 13MP/2MP နဲ့ နောက်ဘက်ကင်မရာကိုတော့ 16MP/2MP စတဲ့ ကင်မရာလေးလုံးပါဝင်တဲ့ စနစ် dual-lens cameras ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုဆန်ဆန်အထိ ရိုက်ကူးနိုင်မယ့်အပြင် Camera feature , portrait modeတွေ အများအပြားကလည်း သင့်ကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမှာပါ။ 18:9 FullView Display အသုံးပြုထားပြီး 5.9လက်မရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်အကျယ် ၊ Android7Nougat နဲ့ မောင်းနှင်ထားပြီး HUAWEI ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် EMUI Skin ကိုသုံးထားမှု ၊စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်းတွေမှာလည်း 8-core Kirin 659 chipset ကို အသုံးပြုထားတယ် ။ သိုလှောင်မှုပမာဏမှာလည်း 4GB RAM နဲ့ 64GB ကိုon-board storageအနေနဲ့ ထည့်သွင်းပေးထားတယ်။ ဘက်ထရီပမာဏကလည်း 3,340mAh ဆိုတော့ကာ သင့်တနေ့တာကို သင်နဲ့အတူ ရှိနေပေးဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ပမာဏပါပဲ ။
Finger Print ကိုလည်းနောက်ကျောဘက်မှာ တပ်ဆင်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ Build in ပါဝင်တဲ့ ကင်မရာ Effect တွေကလည်း သင့်တနေ့တာ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ အားလပ်ရက်ခရီးတွေမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို တထောင့်တနေရာက ပေးနေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ HUAWEI Branded Show Room တွေအပါအဝင် HUAWEI ရဲ့ Dealer Shop တွေမှာ HUAWEIရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေ ခံစားပြီး ဝယ်ယူနိုင်မယ်ဆိုတော့ အခြားသော ကာလာတွေထက် ပိုလန်းမယ့် HUAWEI nova 2i Aurora Blue ဟာ ဝယ်ယူသင့်တဲ့ ဖုန်းတလုံး ဖြစ်ကြောင်းအသိပေလိုက်ပါရစေ။ ယခု ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာဆိုရင် HUAWEIအနေနဲ့ Forbes မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရှိဆုံး အမှတ်တံဆိပ်တွေထဲမှာ အဆင့် ၈၈ နေရာ၊ Brand Finance ရဲ့ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအရှိဆုံး အမှတ်တံဆိပ် ၅၀၀ စာရင်းမှာအဆင့် ၄၀ နေရာ၊ Interbrandရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ် ၁၀၀ မှာအဆင့် ရ၀ နေရာကိုရခဲ့တဲ့ အပြင် Fortune မဂ္ဂဇင်းကနေထုတ်ပြန်တဲ့ ၂၀၁၇ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Fortune ကုမ္ပဏီ ၅၀၀ စာရင်းမှာအဆင့် ၈၃ နေရာကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ထုတ်ပြန်မှုတွေကနေတဆင့် သိနိုင်ပါတယ် ။ပြည်တွင်းစျေးကွက်မှာလည်း ယှဉ်ပြိုင်စရာမလိုအောင် ရပ်တည်နေတဲ့ HUAWEI ရဲ့ HUAWEI nova 2i အနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ရောင်းအား စံချိန်သစ်တင်နိုင်သည်အထိ အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့ကာ သင့်ရွေးချယ်မှု အရွေးမမှားနိုင်ကောင်းဘူးလို့ လက်တို့လိုက်ပါရစေ။
COVID-19 လူနာတွေထားဖို့ ဖောင်ကြီးဆေးရုံမှာဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီလဲ
စင်ကာပူတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုး ကူးစက်သူသစ် ၄၁ ဦးထပ်တိုး ကူးစက်...
ကိုလံဘီယာဆန္ဒပြပွဲမှာ ရဲပစ်ခတ်လို့ သေဆုံးသူရဲ့ ဆွေမျိုးတွေက တရားမျှ...
အင်ဒိုနီးရှားကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းရိုဟင်ဂျာများ(မူရင်း) ပင်...
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟိုင်ရှန် တောင်နဲ့မြောက် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကို...
သီရိလင်္ကာကမ်းရိုးတန်းအနီး ရေနံတင်သင်္ဘော ၁ စီး မီးလောင်
COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးတွင် တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ကို စံပြအဖြစ် လုပ်...
HUAWEI Nova 2i Aurora Blue